IITHAYILE ZEARABIC (IINGCAMANGO ZOYILO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iithayile zeArabic (Iingcamango zoyilo)
Iithayile zeArabic (Iingcamango zoyilo)
Apha sabelana ngegalari yethu yeethayile ze-arabesque kubandakanya i-backsplash yasekhitshini, ishawa yangasese kunye noyilo lomgangatho.
I-Arabesque uyilo lweethayile; Uyilo oluhombise kakhulu olunemigca yokuhamba eqhagamsheleneyo. I-Arabesque ivela kuyilo lwama-Arabhu kunye namaMoor, ihlala iyinxalenye yemisongo. Olu luyilo lukhangeleka lu-organic kwaye lwalunesigqi kwiipateni zalo zamagqabi kunye nakwimigca ecacileyo.
Ngoku, iithayile ze-arabesque zithatha kuloo mbono kunye nesitayile kunye nokudala iimilo zethayile enokusetyenziselwa ukutyibilika, ukugubungela udonga kunye nokubuyela umva. Ezi milo zahlukile kwaye zifumana oko kuMbindi Mpuma, kunye noyilo lwe-arabesque ngokwalo. Ezi tile zihombisile njengoko zikhanyisa intshukumo kunye nesingqisho kunye nepateni yazo egobileyo.
Kuba iithayile ze-arabesque zixhomekeke ngakumbi kubume bayo kunayo nayiphi na enye into, ziza ngezixhobo ezahlukileyo. Iglasi, iiceramic, kunye ne-porcelain tile mosaic zihlala zisetyenziswa xa kusenziwa iithayile ze-arabesque.
I-Arabesque Tile ebuyela umva
I-backsplash yindawo ekugxilwe kuyo ikakhulu ekhitshini kwaye inokuba yindawo yokwenza okanye yokuqhekeza i-aesthetics. Rhoqo yeyona ndawo ifanelekileyo yokongeza imibala kunye nemibala eyahlukileyo kunye neepateni zokubamba iliso ngaphandle kokugcwala isithuba. Ayisiyiyo nje kuphela ukuba iyathandeka, kodwa ikwisiqwenga esisebenzayo ekhitshini. I-backsplash ikhusela iindonga kweyona ndawo isetyenziswa kakhulu ekhitshini, ibonelela ngendawo yokucoca.
I-Backsplashes iqhele ukwenziwa ngeethayile zemibala. Ezi zinokuba yiglasi, i-ceramic, i-porcelain, njl.njl. Iithayile zeceramic okanye ze-porcelain ziya kufuna ufakelo lobuchwephesha- kwaye kucetyiswa ukutyibilika - kodwa ke kwinto encinci efana ne-backsplashes ungagcina iirandi ezimbalwa kwaye ugqibezele iprojekthi ngokwakho ukuba unexesha kunye namandla. Kungenxa yokuba iithayile ezixineneyo ziya kuba nzima, kodwa iithayile ze-mosaic zihlala zibancinci kwaye zilula, ezinye zize zize nomnatha ngasemva ukuze zifakwe lula.
I-backsplash ye-Arabesque ithatha ukusuka kwi-10 ukuya kwi-20 yeedola kwinqanaba ngalinye ngenxa yeempawu zokuhlobisa. Amaxabiso ayahluka ngokobungakanani kunye nezixhobo. Ukufakwa kunokuba lixabiso elongeziweyo nokuba kungobuchwephesha, okanye ukuthenga izinto eziya kufuneka ukuyifaka ngokwakho.
Kukho ukunyuka kokusetyenziswa kwe-arabesque iipateni zethayile Kwiminyaka yakutshanje yekhitshi backsplash. Kungenxa yokuba umnqweno wokuthungwa kunye nentshukumo ubiza abathengi. Nangona oku kuhamba ngoku, kulungile ukuba uqaphele izitayela ezitshintshayo kwaye ugcine engqondweni imibala oyikhethayo ukuze i-backsplash ikwazi ukuthetha ngomzekelo kwaye ihlale iminyaka ezayo. Ngethamsanqa nge-backsplashes nangona kunjalo, kulula ukuba batshintshe ngaphandle kokuba into edlamkileyo ikuluhlu lweminqweno yabathengi ngoku.
Uhlobo lwelokhwe yomtshato yohlobo lomzimba
Le khitshi isebenzisa i-backsplash engwevu ukongeza umahluko kwiikhabhathi zayo ezimhlophe zeShaker.
Oku Uyilo lwekhabhinethi emhlophe Iyacinywa ngokusetyenziswa kweetheyiti zegranite ze-beige, ipeyinti yodonga lwe-beige kunye nombala okhanyayo we-Arabesque tile backsplash.
Eli khitshi linethayile emhlophe ye-Arabesque backsplash ngaphezulu kwesitovu ngaphezulu ehambelana nekhabhathi kunye nemiphezulu yeetafile zemabhile.
Ukuhlamba iTile yeArabesque
Unokusebenzisa iithayile zeArabesque kwishower yangasese kunye neziphumo ezinomdla. Le tile ineentlobo ezininzi ezikhethiweyo zemibala ezenza ukuba kube lula ukudibanisa nezinye izinto ezigqityiweyo kunye nokuhonjiswa.
Iithayile zeArabesque ezisetyenziswa kwigumbi lokuhlambela labatyeleli elinesipili somfanekiso wethayile.
Indawo yokuhlambela yokuhlambela inomgangatho wethayile ye-Arabesque enethayile emhlophe yomgangatho we-octagon kunye ne-faux marble tile ngokwahlukileyo.
Le ndlu yangasese ine-alcove enodonga enomdla kunye ne-Arabesque tile kunye nomxholo ophefumlelweyo waseMoroccan uyilo lwayo.
Ithayile yomgangatho weArabesque
Umgangatho uyinxalenye ebalulekileyo yoyilo kwaye unokuchaphazela kakhulu ubuhle bendawo. Umgangatho unokuma ngaphandle kwaye ube yindawo ekugxilwe kuyo kuyilo, okanye udibanise kwinkangeleko yokudibana kwisithuba. Ukongeza iphethini ye-arabesque kunokwenza enye yezi zinto zimbini. Ukuba yindawo ekugxilwe kuyo yoyilo lwehombo ngolu hlobo sisiqwenga sekhekhe, ukuthatha iithayile ezimile kakuhle kwaye uzibeke kwipateni eyahlukileyo okanye ukhetha imibala ebonakalayo, kukho iithayile ezipeyintiweyo ezinokwenza uyilo oluhle lomgangatho.
Ukuba kukho enye indawo ekugxilwe kuyo (ngesiqhelo umva) iithayile ezimilise i-arabesque zinokukhethwa kwilitye elingathathi hlangothi ukuze lihambelane nelinye eligqibeleleyo kwisithuba, igraya kunye ne-beige (kunye nokudityaniswa kwezi zimbini ziba greige) ulongezo olukhulu ngelixa ungagqithisi isithuba ngepatheni, umbala kunye nokuthungwa. Endaweni yoko isebenzisa ubuhle bayo bendalo kwaye ngokulula kunjalo.
Umgangatho onje uqhele ukwenziwa ngeethayile zekheramic, okanye i-porcelain. Ngokwesiqhelo iithayile zekheramic okanye ze-porcelain ziya kufuna ufakelo lobuchwephesha- kwaye kunye nophahla kuyacetyiswa ngenxa yobunzima kunye nobunzima. Kungenxa yokuba iithayile ezijiyileyo ziyafuneka kumgangatho wangaphantsi kunezicelo zokubuyela umva.
Ezi ziqwenga nazo zonke ziza ngokwahlukeneyo, eziya kufuna isithuba esifanelekileyo kunye nokusikwa kwethayile nganye ukuze ufumane inkangeleko oyifunayo yomgangatho. Ezi zinokuhla ukusuka kwi-15 yeedola ukuya kwi-30 yeenyawo zenyawo nganye ngenxa yeempawu zazo zokuhombisa, ubunzima kunye nobungakanani obufunekayo kumgangatho. Amaxabiso ayahluka ngokobungakanani kunye nezixhobo, kodwa kusetyenziswa i-porcelain okanye i-ceramic.
Ukufakelwa nako kunokuba lixabiso elongeziweyo nokuba kungobuchwephesha, okanye ukuthenga izinto eziya kufuneka ukuyifaka ngokwakho, kuyacetyiswa ukuba usebenzise ingcali xa kufikwa ekufakweni kwamatye okwamatye, ngakumbi ipateni enobuqhetseba enje ngeArabesque.
Ngakumbi Imibono yethayile yangasese yangasese Ndwendwela iphepha lethu legalari.
ke ndithandana nawe ucaphula
Ifanele ukuba nini i-rsvps yomtshato
Inkundla yomtshato ilokhwe yomtshato kunye nobukhulu
Izipho ezilungileyo zomtshato kwizibini ezitshatileyo
izimemo zomtshato kwaye ugcine umhla